Ndị na -enye mmiri mmiri kacha elu 10 na Spain | Ozi ECommerce
Ndị na -enye ụgbọ mmiri kacha elu 10 na Spain
Encarni Arcoya | | Dropshipping
Ọ na -arịwanye elu maka ọtụtụ ndị na -ebubata na eCommerce, kpebie ime ya site na itinye obere ego enwere ike. Na, n'echiche a, ịwụfu mmiri bụ otu n'ime ihe ngwọta nke ọtụtụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha enweghị nnukwu echiche nke lọjistik n'ịntanetị. Mana, ọtụtụ ihe na -ewu ewu, na enwere ụfọdụ ndị na -enye mmiri mmiri nke ahụ dị mma karịa ndị ọzọ. Ị chọrọ ịma nke bụ ndị na -ebubata mmiri na Spain?
Ọ bụrụ na ị na -atụle echiche a maka azụmaahịa ịntanetị ebe ị na -agaghị echegbu onwe gị maka ihe niile eCommerce nwere, yana ịchọrọ iji ya kacha mma, nke mbụ ịkwesịrị ịma ndị bụ ndị ahụ. Anyị ga -agwa gị.
1 Chere, chere, gịnị bụ mbupu mmiri?
2 Ndị na -eweta mbupu mmiri kacha elu na Spain
2.1 Nnukwu Buy, site na ndị na -eweta mbupu mmiri
2.2 Mwakpo China
2.3 Onye nkesa ihe na -esi ísì ụtọ
2.4 Kọmputa DMI, ndị na -enye mbupu mmiri pụrụ iche na teknụzụ
2.8 Ọkwa ikpeazụ
2.9 Ndị na -ebipụta akwụkwọ, ndị na -enye mbupu mmiri nke ihe ahaziri iche
Chere, chere, gịnị bụ mbupu mmiri?
Tupu ị na -ekwu maka ndị na -enye mbupu mmiri, ị kwesịrị ịma ihe okwu ahụ na -ezo aka ịchọpụta ma ọ bụ n'ezie ihe ị na -achọ ma ọ bụ.
Enwere ike ịkọwa mbupu dị ka usoro azụmahịa ebe ụlọ ọrụ na -ere ahịa na -ahụ maka ịchekwa ngwaahịa ị ga -ere na ụlọ ahịa gị. Nke ahụ bụ, ọ ga -arụ ọrụ dị ka ụlọ nkwakọba ihe maka ngwaahịa ndị ahụ ị na -ere na weebụsaịtị gị. Na mgbakwunye, mgbe onye ahịa nyere iwu, kama ịrịọ "ụlọ nkwakọba ihe nkeonwe" ka o zitere gị ka ị nwee ike izigara ya onye ahịa, ọ bụ ụlọ nkwakọba ihe n'onwe ya bụ ọrụ maka ịkwakọba na ibupu ihe.
Kedu ihe ị na -eme? Ọ dị mma, ịnwe webụsaịtị jikọtara na katalọgụ ngwaahịa nke ụlọ nkwakọba ihe gị n'ụzọ ga -echegbu onwe gị naanị maka ịkpọsa azụmahịa gị n'ihi na, ịkwadebe iwu ma ziga ha, onye ọzọ na -ahụ maka ọrụ.
Nke a gụnyere usoro uru dị ka ịghara ịkwụ ụgwọ maka nchekwa na iwepụta ngwa ahịaỊkwesighi ịkwakọba ma ọ bụ bute ngwaahịa ndị ahụ, ị ​​na -enyekwa ụdị dịgasị iche iche na itinye ego na -adịchaghị oke.
N'ezie kwa nwere ndọghachi azụ ya, dị ka ego ị na -enweta emezughị maka gị; A na -enwe akụkụ nke ụlọ nkwakọba ihe na -edebe, na mgbakwunye na enweghị ike itinye ụfọdụ nkọwa maka ndị ahịa na ngwugwu (mana na mgbanwe ị nwere ike ịme vouchers ego na ihe ndị ọzọ, ọ bụrụhaala na ọ megideghị iwu mbupu mmiri). .
Ndị na -eweta mbupu mmiri kacha elu na Spain
Ozugbo anyị kọwapụtara ihe ịwụfu mmiri bụ, ọ bụ oge ịchọpụta nke bụ ndị na -ebubata mmiri na Spain, ya bụ, ndị na -ebubata mmiri nke nwere ike ikwe nkwa ịga nke ọma (ọ bụ ya mere ha ji dị ọnụ karịa ịbanye n'etiti ndị ahịa ha).
Nnukwu Buy, site na ndị na -eweta mbupu mmiri
Anyị na -amalite site na otu ama ama na Spain, nke kachasị ukwuu nke ndị na -akụda mmiri yana kwa nke nwere katalọgụ ngwaahịa kacha ukwuu. Eziokwu bụ na ị nwere ike ịchọta ngwaahịa ụlọ, elektrọnik, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ya mere, ọ na -eje ozi ma azụmaahịa izugbe yana otu dị na otu.
Ee, mgbe ị na -agbalị ikpuchi ọtụtụ ngwaahịa, ị nwere nsogbu na ọnụọgụ ndị asọmpi ị ga -enwe na -abawanye, na mgbe etinyerela ndị a na ngalaba ahụ ruo ọtụtụ afọ, ọ na -esiri gị ike ịtọpụ ha ma ọ bụ, ime nke a, ị ga -ekenye oke mmefu ego maka nkwalite na mgbasa ozi.
Nke a anaghị etinye uche dị ka nke gara aga, n'ihi na kama ịbụ onye izugbe (nke bụ ihe ị nwere ike iche n'aha o nwere), ọ gbadoro anya na ngwaahịa elektrọnik, ọkachasị obere ngwa na ngwa.
Onye nkesa ihe na -esi ísì ụtọ
Otu n'ime nsogbu dị na mbadamba mmiri a nke ndị na -eweta mbupu mmiri ndị ọzọ enweghị bụ nke ahụ katalọgụ ya abụghị nke ọha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ịmara ihe ị nwere ike ree ị ga -ajụrịrị ha maka ozi; ma ọ bụghị na ị gaghị ama ma ọ bụrụ na ha na -ere ihe na -esi ísì ụtọ ma ọ bụ enwere ngwaahịa ụlọ ahịa ọgwụ ndị ọzọ nwere ike ịmasị ndị ahịa gị.
Kọmputa DMI, ndị na -enye mbupu mmiri pụrụ iche na teknụzụ
Otu ọzọ n'ime ndị na -eweta mbupu mmiri ọkachamara na teknụzụ bụ nke a. O nwere ihe karịrị afọ 30 nke ahụmịhe na kọmpụta ma ugbu a ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kacha mara amara na nkwanye ùgwù n'ahịa teknụzụ.
Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịrara onwe gị nye na mpaghara a, ọ ka mma ịnọnyere ndị kacha mma.
Anyị ka nọ na ngalaba teknụzụ, agbanyeghị na anyị na -agbanwe ngwaahịa a ka ere ahịa ntakịrị. Na nke a, enwere ngalaba ngwaahịa abụọ: consoles na ink toners.
Ọ bụrụ na i cheela azụmaahịa chọrọ ngwaahịa ndị a, ọ nwere ike bụrụ ezigbo nhọrọ n'ihi na ha bụ ọkachamara na nke a na, site n'ilekwasị anya naanị na ngwaahịa abụọ, ị ga -ahụrịrị ọrụ na ụdị dị mma maka ndị ahịa gị.
Ị chere maka wepụta ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ n'ịntanetị? Tupu nke a bụ ihe a na -agaghị echetụ n'echiche mana ugbu a, a na -agba ndị mmadụ ume ka ha zụta uwe na akpụkpọ ụkwụ n'ịntanetị ebe ọ bụ na ha maara na, ọ bụrụ na ha ezighi ezi, naanị ihe ha ga -eme bụ iweghachi ya na ọ bụ ya.
Ọ dị mma, otu n'ime ndị na -ebubata mmiri na -elekwasị anya na mpaghara akpụkpọ ụkwụ bụ nke a, yana ụdị akpụkpọ ụkwụ karịrị 5000 na katalọgụ ya (nke a ga -ekwu n'oge adịghị anya).
Mba, ekwela ka aha a duhie gị. E nyefeghị ya na mpaghara ntụrụndụ, mana ọ raara nye kọmpụta. Dị ka ị na -ahụ, enwere ọtụtụ ndị na -akụ mmiri na -arara onwe ha nye otu ihe, mana nke ọ bụla n'ime ha na -enye ọrụ na ọnụ ahịa dị iche, nke bụ ihe nwere ike ime ka itule kwụ otu akụkụ ma ọ bụ nke ọzọ.
N'okwu a, ị nwere ike ịmasị ya n'ihi na ọ bụ mpaghara nke ọtụtụ mmadụ amaghị ka esi achọta ike ya. Kpọmkwem anyị na -ezo aka ihe ọchị, egwuregwu bọọlụ na ịzụ ahịa. Ha nwekwara ihe onyinye ya mere ọ ga -adị mma maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị lekwasịrị anya na ntụrụndụ na onyinye maka ndị anyị hụrụ n'anya nke ukwuu.
Ndị na -ebipụta akwụkwọ, ndị na -enye mbupu mmiri nke ihe ahaziri iche
Ọtụtụ ndị mmadụ na -etinye oge efu ha iji aka ha eme ihe iji ree ha, ọ dị mma? Ọ dị mma, na nke a anyị enweghị ike ịgwa gị na ha ga -ere nka aka, mana anyị nwere ike ịgwa gị ngwaahịa na -ahaziri dị ka t-shirts, okwu ekwentị, akpa, wdg.
Ọ nwere ike ịbụ ụzọ a ga -agba ndị mmadụ ume ime ka ihe ndị gbara ha gburugburu bụrụ ihe pụrụ iche.
N'ikpeazụ, anyị na -ejedebe na ndị na -akụ mmiri nwere ọtụtụ ngwaahịa nke ụdị dị iche iche. Agbanyeghị, dị ka anyị kwuru na mbụ, ịbụ onye na -ahụ maka izugbe, ị ga -eche ọtụtụ ndị asọmpi ihu karịa ka ọ bụrụ ọkachamara na otu ngwaahịa.
Tupu ịmalite n'ime nke mbụ ị hụrụ nke masịrị gị, anyị na -akwado ka ị jiri nwayọ mee mkpebi ahụ, na -atụle uru na ọghọm nke mbupu mmiri yana ọnọdụ nke onye ọ bụla na -eweta mbupu mmiri nwere ike ịnye gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Ngwaọrụ » Dropshipping » Ndị na -enye ụgbọ mmiri kacha elu 10 na Spain
Ndị ahịa nwere ike
Kedu ihe bụ ahịa mmekọrịta